Gbasara Anyị - Sichuan Yinye Medical Technology Co., Ltd.
WHO Anyị na
Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100, yana ihe karịrị mba 30 nwere mmekorita ihe gbasara ọrịa na-efe efe. Yin Ye anọwo na-enwe mmekọrịta chiri anya na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ mahadum a ma ama na ụlọ ọrụ nyocha na China, ma kpebisie ike ịbụ ọsụ ụzọ na teknụzụ mgbochi ọrịa.
Yinye ọgwụ na ahịa ọrụ netwọkụ ejirila kpuchie mpaghara niile nke ụwa. Ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ bụ "Zụlite Teknụzụ na Ahụike Ahụike Mmadụ" na "Ogo na-ekpebi ndụ na ọnwụ nke ụlọ ọrụ, Ndị Ahịa na-ekpebi ọganiihu ma ọ bụ ọdịda nke ụlọ ọrụ, Talent na-ekpebi ọganihu na ọdịda nke ụlọ ọrụ, na Innovation na-ekpebi ọdịnihu nke ụlọ ọrụ "dị ka ebumnuche ya. Valueskpụrụ dị mkpa, ka ị bụrụ onye na-ebubata ngwa ahịa ọgwụ nke ụwa.
Companylọ ọrụ anyị na-eji ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ mmepụta ihe eme ihe n'ụzọ zuru oke, na-achịkwa usoro ọ bụla nke ọma ma hụ na akụkụ nke ọ bụla dị mma. Mgbe ere ngwaahịa ndị ahịa, anyị ga-eduzi a zuru set nke nchoputa na ngwaahịa, na mgbe ahụ ka mma na nkà na ụzụ na àgwà. Anyị enwetakwala ọtụtụ asambodo.
Anyị nwere otu ndị ọkachamara na-ere ahịa, ha ejirila teknụzụ kachasị mma na usoro nrụpụta, nwee ahụmịhe ọtụtụ afọ na azụmaahịa mba ofesi, yana ndị ahịa nwee ike ikwurịta okwu na-enweghị nsogbu ma ghọta nke ọma ezigbo mkpa ndị ahịa, na-enye ndị ahịa ọrụ nkeonwe na ngwaahịa pụrụ iche.
Ulo oru a nwere ndi oru nyocha sayensi siri ike, ihe kariri 30% nke ndi otu ulo oru a nwere ndi isi ndi okacha amara na doctoral ... Kwụ ụgwọ nkwụghachi, ọnụahịa nhatanha bara uru, ma mee ka ndị ọrụ, ndị ahịa, ndị na - ekenye ya na ndị na - ebubata ya merie mmeri.